WARBIXIN: Hazard, Griezmann, De Ligt, Ramos, Fekir & Saxiixyada Laga Yaabo In Ay Dhacaan Suuqa Xagaagan. – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Hazard, Griezmann, De Ligt, Ramos, Fekir & Saxiixyada Laga Yaabo In Ay Dhacaan Suuqa Xagaagan.
May 25, 2019 kooxda Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 1
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa si Rasmi ah u furmay waxana bilaabmay dhaq-dhaqaaqa kooxaha reer yurub kuwaas oo bilaabay sidii ay u joojin lahaayeen kooxdooda inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Suuqa xagaagan ayaa si weyn loo filayaa in uu noqdo midka ugu mashquulka badan marka loo eego in ay kooxo badan oo reer yurub ah si weyn isku xoojin doonaan kadib niyad jab soo gaadhay xilli ciyaareedkii dhamaaday.
Kooxaha Man United, Real Madrid, Bayern Munich iyo waliba kooxo kale ayaa noqon doona kuwa ugu mashquulka badan xagaagan si ay u xoojiyaan kooxohooda ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub.
Kooxaha Arsenal, Man City, Liverpool, Barcelona iyo kooxo kale ayaan iyagun noqon doonin mashquul badan lacag badana galin doonin marka loo eego lacago ku filan oo ayna galin doonin suuqa sababo kala duwan.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa xiddigaha ugu hadal haynta badan maalimihii la soo dhaafay iyo waliba kooxaha lala xiriirinayo.
Xiddiga reer Belguim ayaa shanki la,aan noqon doona saxiixyada ugu qaalisan marka loo eego in uu ku biiri doono kooxda Real Madrid xilli ay Chelsea dul dhigtay madaxiisa lacag dhan 100 milyan oo euro waxana la filayaa in saxiixa xiddigan la dhamaystiro kadib finalka Europa league xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer France ayaa lala xiriirinayay kooxda Barcelona kadib markii uu xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Atletico Madrid laakiin waxa maalmihii ugu dambeeyay soo baxaya warar sheegaya in uu xiddiga reer France ku biiri karo kooxda Man United kuwaas oo la sheegayo in ay wadahadalo kula jiraan xiddiga reer France si ay uga dhigaan saxiixooda ugu weyn.
3.Matthijs De Ligt:
Waa xiddig kale oo si weyn loola xiriirinayo kooxda Barcelona waliba ay ku raad joogtay muddo dheer si ay u hesho adeegiisa kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu soo bandhigay xilli ciyaareedkan.
Laakiin Kooxda Man United ayaa sidoo kale haatan kaga horaysa Saxiixa Xiddiga iyaga oo u soo bandhigay lacagta mushaharka ah ee ay kooxda Barcelona diidantahay in ay xiddiga siiso.
Waa xiddig ku cusub suuqa kala iibsiga kadib markii ay si lama filaan ah u soo bexeen wararka sheegaya in uu Ramos ka fikirayo in uu isaga tago kooxda Real Madrid inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Inkasta oo ay sheegayaan warar la isla dhex marayo hadana ma jiraan wararka dhabta ah ee ka dambeeya go,aanka xiddigu uu uga fiirsanayo in uu isaga tago kooxda Real Madrid waxana uu haatan xiiso ka helayaa kooxaha Liverpool iyo Man United kuwaas oo wadahadalo la qaatay wakiilka xiddiga.
Waa xiddig si weyn loola xiriirinayay kooxda Liverpool xagaagii hore laakiin heshiiska ayaa bur-buray sababo la xidhiidha caafimaadka xiddiga oo lagu helay dhaawac uu ka qabo jilibka.
Laakiin Reds ayaa haatan rajo fiican ka haysata saxiixa xiddiga kadib markii uu madaxweynaha kooxdu qirtay in ay diyaar u yihiin in ay ka iibiyaan xiddiga reer France hadii ay xagaagan helaan dalab fiicann.
Waa xiddiga ku dhibaatoonaya kaydka Barcelona waxana uu xiiso ka helayaa kooxda Bayern Munich kuwaas oo xaqiijiyay in ay diyaar u yihiin in ay u dhaqaaqaan saxiixa xiddiga reer Germany.
Wararka ayaa sheegaya in ay Bayern Munich diyaar la tahay dalab lacageed oo dhan 70 milyan oo euro si ay u helaan adeega xiddiga inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
7.David De Gea:
Goolhayaha reer Spain ayaa baxsad ka ah kooxda Man United inkasta oo ay doonayaan in ay heshiis cusub ka saxiixdaan xiddiga laakiin sabab la xidhiidha mushaharka xiddiga ayaa lala xiriirinayaa kooxda PSG kuwaas oo doonaya in ay 60 Milyan ku helaan adeegiisa xagaagan ama ay si xor ah ku helaan xilli ciyaareedka dambe.
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Eintracht Frankfurt ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxda Real Madrid kuwaas oo doonaya adeegiisa inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan
Xiddiga reer Brazil ayaa ka mid ah xiddigaha sida weyn loo filayo in uu isaga tago kooxda Barcelona inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan kadib markii uu ku fashilmay kooxda xilli ciyaareedkan.
Waxa jira xiddigo badan oo laga doonayo suuqa kala iibsiga xagaagan kuwaas oo qaarkood lagu helayo heshiis xor ah oo ku biiri kara kooxda ay doonayaan xagaagan.
Xiddigahaas ayay ka mid yihiin Daniel James oo ku dhaw in uu 15 milyan ugu biiro kooxda Man United.
Waxa jira Adrien Rabiot kaas oo si xor ah ugu tagi doona kooxda PSG lala xiriirinayo kooxo badan oo reer yurub ah oo kala ah Arsenal, Juventus iyo Man United.
Waxa jira xiddigo badan oo kale kuwaas oo aan halkan lagu soo koobi Karin laakiin waxa aan warbixintan ku soo qaadanay inta aanu xasuusano.
Man United Oo Go,aan Muhiim Ah Ka Qaadatay Mustaqbalka Marcus Rashford
Arsenal Oo Indhaha Looga Soo Dhuftay Dalabkii 2-aad Ee Ay Ka Gudbisay Badalka Nacho Monreal
“Isaga Ayaa Sabab U Ah In Ayna Barcelona Ku Guulaysan Champions League 5 Sano”:- Louis Van Gaal Oo Weerar Culus Ku Qaaday Lionel Messi
Barcelona Oo Iska Diiday Soo Laabashada Dani Alves & Sababta Oo La Ogaaday.
Ricardo Carvalho: Waan Garanayaa Eden Hazard, Qaab Fiican Ayuu Ku Soo Bandhigi Doonaa Real Madrid